Punctuation အလွဲများ - Myanmar Network
Posted by Betty on November 11, 2014 at 11:13 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ဒီတစ်ခေါက် ဆွေးနွေးချင်တာက comma နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အမှား တွေပါ။ စာရေးတဲ့အခါ comma က အဓိပ္ပါယ်ကို ရှင်းလင်းအောင် စာကြောင်းကို စံနစ်တစ်ကျ ဖြတ်တောက်ပေးပါတယ်။ comma ကို အထည့်မှားရင် အဓိပ္ပါယ်ပါ ပြောင်းသွားတာ၊ အဓိပ္ပါယ် ပျောက်သွားတာ၊ ပိုမို ရှုပ်ထွေးသွားတာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
မှားလေ့မှားထရှိတဲ့ တစ်ခုက comma ကို မလိုအပ်ဘဲ မဆိုင်တဲ့နေရာတွေမှာ လျှောက်ထည့်တာပါ။ အောက်မှာတော့ comma အမှား ၅ မျိုးကို ဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ်။
၁။ Incorrect: The laptop on the table, is mine.
Correct: The laptop on the table is mine.
Subject ကို သူရဲ့ verb နှင့်မခွဲရပါ။ ဒီစာကြောင်းမှာ subject က “The laptop on the table.”
၂။ Incorrect: Motel rooms, that are dirty, ought to be illegal.
Correct: Motel rooms that are dirty ought to be illegal.
Restrictive clause (အချုပ်စာစု) မဖန်တီးလိုက်ပါနဲ့။ “that are dirty” စာစုဟာ “motel rooms” အတွက် အဓိကကျတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာ comma မှ မလိုအပ်ပါဘူး။
၃။ Incorrect: The dog understood at once, what his handler wanted.
Correct: The dog understood at once what his handler wanted.
Verb တစ်ခုကို သူရဲ့ direct object သို့မဟုတ် complement နဲ့ မခွဲလိုက်ပါနှင့်။ “what his handler wanted” ဆိုတဲ့ စာစုဟာ understood ဆိုတဲ့ verb ရဲ့ object ဖြစ်နေလို့ပါ။
၄။ Incorrect: Jethro wanted to be eitherabrain surgeon, orafry cook.
Correct: Jethro wanted to be eitherabrain surgeon orafry cook.
Coordinate conjunction တွေနဲ့ တွဲထားတဲ့ paired elements ကို comma နဲ့ သုံးပြီး မခွဲရပါ။ ဒီအကြောင်းမှာ paired elements တွေဟာ “a brain surgeon” နဲ့ “a fry cook.” ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာ comma မှ မလိုပါဘူး။
၅။ Incorrect: The famous author lives inasmall town, because she doesn't like the noise ofabig city.
Correct: The famous author lives inasmall town because she doesn't like the noise ofabig city.
နောက်မှ လိုက်လာတဲ့ ပံ့ပိုးမှုပေးတဲ့ dependent clause ကနေ အဓိက အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ introductory independent (main) clause ကို ခွဲမထုတ်လိုက်ပါနဲ့။ “The famous author lives inasmall town” က main clause ဖြစ်ပါတယ်။
မှတ်ချက် ။ အကယ်၍ dependent clause က အရင်လာရင်တော့ comma ကို သုံးရပါမယ်။
“Because she doesn't like the noise ofabig city, the famous author lives inasmall town.”
Periods (fullstops) နှင့် Comma များ
Quotation ခေါ်တဲ့ စကားပြောတာကို direct speech နဲ့ ထည့်ရေးတဲ့ အခါ periods တို့ comma တို့ကို closing quotation (မျက်တောင် အပိတ်) အတွင်းဘက်မှာ ရေးရတယ်။
အောက်ပါ ဥပမာတွေကို ကြည့်ရအောင်။
တစ်စုံတစ်ယောက် ပြောတဲ့စကားကို direct speech နဲ့ စကားပြော အတိုင်းရေးတဲ့ အခါမှသာ say သို့မဟုတ် said တို့နဲ့ introduce လုပ်ရပါမယ်။
Say အစားသုံးလို့ရတဲ့ အခြားအဓိပ္ပါယ်တူ စာလုံးများကတော့ states, writes, notes, comments, observes, concludes, reports, maintains နဲ့ adds တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ စကားပြောကို say ကဲ့သို့သော verb နဲ့ introduce လုပ်ရင် အဲ့ဒီ verb နောက်မှာ comma ထည့်ပါ။ အကယ်၍ စကားပြောကို that နှင့် introduce လုပ်ပါက verb အနောက်မှာ comma မထည့်ပါနှင့်။
Technical writing မှာတော့ period ကို quotation mark (မျက်တောင်အပိတ်) အပြင်ဘက်မှာ ထည့်ရပါတယ်။ Chicago Manual of Style မှာ quotation က အတွင်းမှာ ထည့်ထားတဲ့ period ကြောင့် အဓိပ္ပါယ်မမှားရအောင် printed instructions မှာ ဒီလို ဥပမာပေးထားတယ်။
Question Marks နှင့် Explanation Point (exclamation marks)
ရေးသားဖော်ပြတဲ့ quoted material ဟာ မေးခွန်း သို့မဟုတ် အာမေဍိတ် ဖြစ်ခဲ့ရင် သက်ဆိုင်ရာ marks တွေကို quotation marks အတွင်းပိုင်းမှာ ရေးရတယ်။
အကယ်၍ framing sentence က question သို့မဟုတ်exclamation ဖြစ်ခဲ့ရင် end marks တွေကို (မျက်တောင်အပိတ်) အပြင်ဘက်မှာ ရေးရတယ်။
အင်္ဂလိပ်စာသုံးသူတွေမှာ punctuation နဲ့ပတ်သက်လို့ အယူအဆ အမျိုးမျိူး ရှိကြမှာပါ။ punctuation က စာရေးအသားမှာ အဓိပ္ပါယ်ရှင်းလင်း ပြတ်သားအောင် ကူညီပေးပါတယ်။ အယူအဆတွေကတော့ ဒေသအလိုက်၊ မျိုးဆက်အလိုက် ကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။ နောက်ဆုံး အနေနဲ့ အလွယ်မှတ်လိုပါက quotation နဲ့သက်ဆိုရင် question mark တို့ exclamation mark တို့ကို မျက်တောင်အပိတ် အတွင်းထဲမှာ ထားရပြီး၊ framing sentence နဲ့ဆိုရင် question mark တို့ exclamation mark တို့ကို မျက်တောင်အပိတ် အပြင်မှာထားရတယ်ပေါ့။
Dailywritingtips.com မှ Maeve Maddox ရဲ့ Punctuation Mistakes မှ ကိုးကားဘာသာပြန်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Permalink Reply by thinkhaingsoe on November 11, 2014 at 15:50